Aretina tongotra mena amin'ny alika | Tontolo alika
Ny biby dia mpikambana ao amin'ny fianakaviana ary noho izany, mitaky fitandremana lehibe. Midika izany fa manaraka hatrany ireo fanehoan-kevitra mety ho tonga amin'ny vatanao amin'ny fotoana iray, satria olona mila fitandremana sy fikarakarana izy ireo, ny sasany mihoatra ny hafa, fa amin'ny farany dia misy hatrany ny haavon'ny fikarakarana ankapobeny.
Mandritra izany fotoana izany, ny alika dia iray amin'ireo biby fiompy ankafizin'ny olona indrindra ary izany no antony ahitantsika azy ireo amin'ny trano maro ankehitriny.
1 Inona avy ireo soritr'aretina sy ny antony?
1.2 Fifandraisana amin'ny vokatra mahasosotra
1.3 Allergie sakafo
2 Ahoana ny fomba itondrana ny alika mena alika araka ny antony
2.1 Fitsaboana holatra ny tongotra mena
2.2 Fitsaboana ho an'ny mpampahasosotra
2.3 Fitsaboana ny allergy amin'ny sakafo
2.4 Fitsaboana tongotra mena amin'ny manaikitra
3 Antony hafa mety hiteraka tongotra mena amin'ny alika sy ny fitsaboana azy ireo
3.2 Ratra amin'ny pads
Inona avy ireo soritr'aretina sy ny antony?
Betsaka ny tondro izay mampitandrina antsika matetika momba ny fijalian'ny aretina sasany amin'ny alikanay, ka androany dia tianay ny hilaza aminao ny iray amin'ireo aretina manontany tena indrindra, ilay antsoina hoe ranjo mena.
Fantatra tsara fa ny alika dia mazàna mijaly amin'ny faritra sasany amin'ny vatany, ary koa ny fahasarotana sasany amin'ny hodiny, na izany aza, ireo olana ireo dia matetika tsy fahasarotana lehibe ho azy ireo. zavatra izay misy ifandraisany amin'ny firazanana sy tontolo iainana ihany koa ao no ahitana azy.
Manana alika mena ve ny alikanao? Izy io dia mety misy ifandraisany amin'ny antony maro, eto dia ahariharintsika ny iray amin'ireo matetika matetika:
ny aretina masirasira Izy ireo dia mety ho iray amin'ireo antony lehibe indrindra hahitantsika an'ity karazana fihetsiketsehana ity amin'ny tongotry ny alika.
Amin'ny ankapobeny, ny alika matetika mampiseho soritr'aretina amin'ny alàlan'ny fitondran-tena, toy ny amin'ny holatra, ny manaikitra tsy tapaka sy milelaka ny tongony, toe-javatra mety hiharatsy hatrany.
Ny holatra tompon'andraikitra amin'ny aretina fantatra amin'ny anarana hoe candidiasis dia ny Candida albicans. Izany dia zava-dehibe ny mitondra ny alikanay any amin'ny vet Manoloana ireo karazana toe-javatra ireo, satria io dia hahafahantsika mahazo antoka ny fijalian'ny alikantsika, satria ny aretina dia mety miova arakaraka ny holatra ary izy ireo dia afaka mamindra ny tompony ihany.
Fifandraisana amin'ny vokatra mahasosotra
Indrindra amin'ny faritra ambanivohitra, ny alika dia mazàna mamakivaky gorodona amin'ny karazan-javamaniry na zavamaniry, matetika dia mampiharihary azy ireo izany a zavatra simika be dia be fa amin'ny tranga maro dia matetika ny zavamaniry no ampiasaina ho fiarovan-tena. Izany no antony mahazatra ny mahita ny fomba aharetan'ny alika an'io sokajin-javatra io. Saingy tsy ny zava-drehetra dia hianjera amin'ny faritra ambanivohitra ary ny fitaovam-panadiovana maro no mety hiteraka fanehoan-kevitra toy izany amin'ny alika.
Ilaina ny mitazona ny alikantsika hiala amin'ireo faritra ampiasana ireo karazana vokatra ireo, indrindra raha mbola lena ny tany. Zava-dehibe ny hahazoana antoka fa maina tanteraka ilay faritra ary vonona ny hivezivezy ny alikantsika.
Toy ny amin'ny olombelona, ny alika koa dia mety hanana fanehoan-kevitra mahazaka vokatry ny sakafo manokana.
Matetika ny proteinina dia iray amin'ireo tena tafiditra amin'ity raharaha ity, indrindra ny akoho, ka ny tsara indrindra azontsika atao dia ny mitondra ny alikanay any amin'ny mpitsabo biby mba hanao ny fitiliana mifanaraka aminy.
Ny ratra dia mety hahatonga ny alikantsika hikorontana mandritra ny fotoana maharitra, hatramin'ny fotoana mahazo mamorona fahasosorana ao amin'io faritra io. Zava-dehibe ny manara-maso ireo karazana ratra ireo amin'izy ireo, manalavitra araka izay azo atao ny filàna hikorontana samirery.
ny bibikely bibikely Izy ireo koa dia mazàna mitarika an'ity karazana toe-javatra ity, ny zavamaniry sasany ary na ny vokatra misy aza ao anaty tany toy ny vera na tariby vaky. Toy ny amin'ny tranga rehetra, ny veterinera dia hahafantatra ny fomba hamaly an'ity toe-javatra ity, amin'ny fampiharana ny fitsaboana mety indrindra mety hisy.
Anisan'ireo zavatra maro azo atao Zava-dehibe ary ilaina ny hitazomana ny alikantsika eo ambany fikarakarana ilaina. Ny fitsidihana ny mpitsabo dia tokony ho tsy tapaka, indrindra raha ny alikantsika dia miharihary amin'ireo karazana singa ireo isan'andro ao an-trano.
Ahoana ny fomba itondrana ny alika mena alika araka ny antony
Tahaka ny efa nataonao teo aloha dia misy antony maromaro mahatonga ny alika hanana tongotra mena. Ny sasany amin'izy ireo dia mora tsaboina, fa ny hafa kosa mila fitsidihana mpitsabo. Amin'io lafiny io, te hanome anao hevitra momba ny fitsaboana tokony hatao izahay hanamaivanana ny olana sy ny tsy fahazoana aina ateraky ny ranjo mena amin'ny alikao.
Fitsaboana holatra ny tongotra mena
Rehefa misy aretin'ny holatra amin'ny tongotra, ary miteraka tongotra mena dia mitovitovy amin'ny an'ny olombelona ny fitsaboana. Izany hoe, miresaka isika mampiasa vokatra manohitra ny holatra. Io no mpitsabo biby afaka manoratra ny vokatra tsara indrindra ho azy ireo satria ny vokatra ampiasainay dia tsy dia mety indrindra amin'ny namantsika volo.
Fitsaboana ho an'ny mpampahasosotra
Araka ny efa nohazavainay, misy ny vokatra izay mety mahasosotra ny alikanao, ary ny iray amin'ireo fanehoan-kevitra izay ananan'ny hodiny dia ny fivontosana sy ny fisehoany miloko mena. Na izany aza, tsy noho ny fahasosorana simika fotsiny io, fa mety hitranga amin'ny zavamaniry voajanahary ihany koa.
inona no hatao amin'izany? Ny zavatra voalohany tokony hatao dia manasa tsara ny faritra amin'ny savony sy rano. Tsy misy zavatra hafa. Raha vantany vao manao izany ianao tokony hiala ny fahasosorana rehefa mandeha ny fotoana. Saingy indraindray ny olana dia mitohy ary avy eo dia mila fitsaboana manokana momba ireo vokatra ireo ianao.
Ohatra, alao sary an-tsaina hoe tany amin'ny faritra mikitroka ianao ary, noho izany, lasa mena ny tongotrao, voalefona ary mangidihidy koa, mivonto, sns. Ny fanasana ny faritra fotsiny dia tokony handalo, fa misy alika mora tohina kokoa izay mitaky fanafody hanala ireo soritr'aretina ireo. Ary, toy ny mahazatra, mamporisika anao izahay handeha any amin'ny mpitsabo biby.
Fitsaboana ny allergy amin'ny sakafo
Raha misy allergy amin'ny sakafo, arakaraka ny hamafiny, dia mety mila karazana fitsaboana ara-pahasalamana ianao mba hanamaivanana ny vokany.
Amin'ity toe-javatra ity dia tsara indrindra mankanesa any amin'ny veterinera handinika ny tranga misy anao ary afaka manome anao, ohatra, fanindronana hanoherana ny allergy, indrindra raha tsy ny tongotra ihany no voakasik'izany fa miteraka olana hafa tsy maintsy vahana haingana araka izay tratra.
Fitsaboana tongotra mena amin'ny manaikitra
Rehefa niseho ny tongotra mena vokatry ny hanaikitra, ny zavatra mahazatra indrindra dia ny fanosotra crème manala ny tsy mahazo aina, fanaintainana, fivontosana sns. ny faritra. Ankehitriny, mamporisika anao izahay hitondra azy any amin'ny mpitsabo biby mba hanamarina fa, eo amin'ny sehatry ny manaikitra, dia tsy nisy sisa tavela, toy ny fanindronan'ny bibikely, na karazana zavatra hafa izay mahatonga ny tsy fahazoana aina bebe kokoa amin'ny biby (satria manohy manome poizina manorisory an'io faritra io.
Raha vantany vao azonao antoka fa tsy misy na inona na inona ny faritra dia tsy maintsy ho voan'ny otrikaretina tsara ary tsaboina izany sao tsy mikasika azy loatra ny alikanao. Indraindray dia ilaina ny mampiasa vozon'akanjo Elizabethan mba tsy hidirany amin'ilay faritra, na koa ny fehy vonjimaika mba hahomby ny fanasitranana.
Antony hafa mety hiteraka tongotra mena amin'ny alika sy ny fitsaboana azy ireo
Ho fanampin'ireo antony lehibe hitantsika izay mety hiteraka fisehoan'ny tongotra mena, misy antony hafa mety hahagaga anao ny alikanao amin'ny fananana azy ireo toy izao. Raha ny marina, amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra izay ho hitanao etsy ambany, ny alikanao dia tsy mahazo aina, tsy te handeha ary hilelaka foana na hanaikitra ny tongony izy mba hanandramana hanamaivana ny olana.
Nihevitra ve ianao fa ny alika dia tsy afaka mandoro ny tongony? Raha ny marina dia tena diso ianao. Amin'ny fahavaratra indrindra, rehefa avo ny mari-pana, Ny fandehanana mitsangatsangana miaraka amin'ny alikao dia mety hampijaly tokoa satria mandeha tsy mitanjaka izy ireo. Raha may ny asfalta na ny sisin-dàlana, dia hanitsaka azy foana ilay biby ary hirehitra.
Saingy tsy amin'ny fahavaratra ihany no mitranga izany. Amin'ny ririnina, ny hatsiaka dia mety hiteraka may ihany koa, ary indraindray manelingelina sy mampidi-doza kokoa noho ny masoandro izy ireo.
Hanome anao hevitra. Miezaha mandeha tsy mitondra kapa amin'ny alàlan'ny alikanao. Tsy tantinao ve? May? Eny, izany no terenao ny alikanao.
Rehefa mandoro ny tongony ny biby dia manjary mamontsina sy mena, indrindra ny faritry ny pads, izay mahatonga azy ireo hikororoka, mibontsina ary milelaka ilay faritra. Mba hanamaivanana azy dia andramo mandena ny tongotra amin'ny rano mangatsiaka ary asio vokatra anti-scald sy antibacterial hanamaivana ny tsy fahazoana aina.
Ratra amin'ny pads
Ny ratra amin'ny Pad dia mety hiteraka alika mena ny alika, na koa foza manakana azy tsy hihetsika tsara. Ireo ratra ireo dia mety hiseho noho ny antony maro samihafa toy ny noho ny fiakanjoana be loatra amin'ny tongotra, noho ny fanatanjahan-tena (na manao mihoatra na manao kely), misy fiantraikany amin'ny zavatra, sns.
Amin'ity tranga ity, ny fitsaboana dia hiankina amin'ny antony lehibe nahatonga ny olana. Raha noho ny fahatapahana na noho ny zavatra nofantsihana tamin'ny hazo, ny zavatra voalohany dia ny hahazoana antoka fa tsy tafiditra ao anaty tongony ity zavatra ity ary, raha toa ka tsy maintsy esorina izy io.
Avy eo dia mila manadio tsara ilay faritra ianao ary mamehy azy mba hanandramana hamerina an'io ampahany io (na farafaharatsiny mba hanasitranana ny ratra). Na ahoana na ahoana, ny fitsidihana mpitsabo dia afaka manampy amin'ny fikarohana vahaolana sy fitsaboana tsara indrindra mampiasa menaka, zaitra implant, Etc.
Ahoana no hikarakarana ny fonon'ny alika?
Ary farany, olana iray hafa mety hijaly ny alikao izay mifandray amin'ny hoditra dia ny pododermatitis. A fivontosana eo amin'ny tongony izay mety hiseho eo anelanelan'ny rantsan-tongotrao, amin'ny atin'ny tongony, na manerana azy rehetra.
Mampiavaka azy ny fanodinana ny tongotra ho mena ary mety noho ny antony maro mahatonga ny hoditra ao amin'io faritra io ho sosotra sy hihetsika. Anisan'ireny, ny zavatra mahazatra dia misy allergy, katsentsitra, parasy, mites, sns. Fa mety misy olana amin'ny endocrine koa, toy ny tsy fetezana tiroidia, kista, na ny hery fiarovan'ny hery fiarovanao.
Aza adino fa tsy ratsy mihitsy ny miaro ny tongotry ny alika miaraka amin'ny balsama manokana izay mamelona sy mamelombelona ny pads anao koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Aretina tongotra mena amin'ny alika
magui dia hoy izy:
Maria no anarako ary ny alika 11 taona androany nahitako azy mena teo anelanelan'ny rantsan-tànany, mety manaikitra izany, voan'ny dermatitis azoko apetraka aminy izy. Misaotra.
Mamaly an'i Magui
Afaka manana hafanana ve ny alika toraka?